အကြိုက်ဆုံး ကဗျာလေး ရေးပေးဖို့တက်တယ်တဲ့။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အကြိုက်ဆုံး ကဗျာလေးတွေက မောင်စိန်ဝင်းရဲ့ ကဗျာလေးတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ မကြီးက အဲကဗျာတွေကတော့ တက်တဲ့သူ သုံးထားတာမို့  တစ်ခြား ကဗျာဆရာတွေထဲက ရေးပေးဆိုတော့ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ဗေဒါလမ်း ကဗျာစာစုထဲက အကြိုက်ဆုံး ကဗျာ ၃ပုဒ်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။တက် ရေးခိုင်းတာတော့ တစ်ပုဒ်ထဲပါပဲ။ ၃ပုဒ်ထဲက ဘယ်ဟာအကြိုက်ဆုံးလည်း မသိဖြစ်နေလို့ ၃ပုဒ်လုံး ရေးပေးလိုက်တာပါ။ ဗေဒါပန်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဇွဲလေးကို ပေါ်လွင်အောင် ရေးဖွဲ့နိုင်တယ်။ ဗေဒါပန်းလေး ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတာ လူတစ်ယောက်ဘ၀မှာ လှုပ်ရှား ရုန်းကန်နေရသလိုမျိုး အခက်အခဲ၊အကွေ့အကောက်၊အထုအပုတ် တွေ နဲ့ ပြည့်နှက်နေတာလေးကို ဖော်ကျူးထားတာလေးပါ။ ဘယ်လိုပင် အခက်အခဲတွေ တွေ့တွေ့ ၊ ဘယ်လို လောကဓံတရားတွေကပဲ ရိုက်ခတ် ရိုက်ခတ် ၊ ဘယ်တော့မှ ဦးကျိုးမသွားတဲ့ ဗေဒါပန်းလေးလိုမျိုး အစဉ်ထာဝရ ပန်းပန်နေနိုင်ဖို့အတွက် တင်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ညိုပြာပြာ လတာပြင် ခြေရင်း။
အုန်းလက်ကြွေ့ သူ့နံဘေး၊ ဆောင့်ခဲ့ရသေး။
မြှုပ်လေပေါ့ ပေါ်မလာ၊ မဗေဒါ အလှ။
တစ်လံကွာ လှိုးအကြွ၊ ပေါ်လိုက်ပြန်ရ။
ဗေဒါပျံ အံကိုခဲ၊ ပန်းပန်လျက်ပဲ။ ။
ဗေဒါ နှင့် ကျူပင်
မဗေဒါ ၊ ဆန်လာပေါ့ အပြင်း။
ဗေဒါဆွေ၊ ရေစုန်နဲ့ ပြန်ဆင်း။
မဗေဒါ၊ ဆန်လာပေါ့ အတင်း။
ညောင်ညိုပင် မြစ်ပါးပျဉ်း၊ ပုန်းရပြန်ရင်း။
ဗေဒါဆွေ၊ စုန်ရေနဲ့ ပြန်ဆင်း။
ညောင်ညိုပင် မြစ်ပါးပျဉ်း၊ ခေါင်းဖော်လိုက်ရင်း။
ကျူပင်ရိုးမှာတော့၊ ယိမ်းထိုးရ အခါခါ။
မဗေဒါ စုန်ဆန်မျော၊ မောတဲ့နေရာ။
လွှဲလိုက်ရ ဘယ်နဲညာ၊ရိုးတံညှာ ရွက်စိမ်း။
ယိုင့်တယိုင် ဒီရေစီးကို၊ သည်းခံလို့ ယိမ်း။ ။
Posted in ကဗျာ by ကိုစွမ်း
"အဖေကြီးရေ...ဒီမှာ သားသား အက်အက်တွေ ပါချလို့ အနှီးအသစ်လဲရအောင် ယူခဲ့ပေးပါတော်"
ရင်ခွင်ထဲမှာ တအီအီ ငိုနေတဲ့ သားကို ချော့ရင်း ဒေါ်မြတစ်ယောက် လင်တော်မောင်ကို လှမ်းပြောလိုက်တယ်။
"အေးအေး..လာပြီလာပြီ။၊ဒါနောက်ဆုံးတစ်ထည်ပဲနော် ။ အားလုံးက အပေတွေချည်းပဲ။ဒီနေ့တင်ကို နင့်သားသုံးတာ အနှီး၅ထည်ရှိနေပြီ"
"အင်းပါရှင်...ရှင်ကလည်း ကလေးပဲ ဘယ်သိဦးမှာလဲ။ ပါချင်ရင်ပါမှာပေါ့။ သား အိပ်ပျော် သွားရင် ပေနေတဲ့ အနှီးတွေ အားလုံး ကျွန်မ လျှော်မလို့ပါပဲ။ ကဲပါ..ရှင့်လက်ထဲက အနှီးပေး.ပေး"
ပြောပြောဆိုဆို ကိုလှလက်ထဲက အနှီးကို လှမ်းယူပြီး သားတော်မောင်ရဲ့ ပေကြံနေတဲ့ တင်ပါးကိုသုတ်သင်ပေးလိုက်တယ်။
"ဒါနဲ့ အမေကြီး .. ခုနကလည်း သားသား ရှုးတွေပေါက်ချလို့ အကျီ င်္တွေစိုနေတယ်ဆို သွားလဲလိုက်လေ"
"ရပါတယ်...မလဲတော့ပါဘူး။ကျွန်မသားက ကျွန်မ သူ့ကို ချစ်၊မချစ်သိချင်လို့ အချစ်စမ်းတာပါ။"
သားမောင်ရဲ့ ပါးပြင်ရဲရဲလေးကို မွှေးကြူရင်း ကိုလှကို ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
"နော်..သားသားရယ် သားသားက မေမေ့ကို အချစ်စမ်းတာမလား။"
မိခင်တစ်ယောက်အတွက် သူ့သားရဲ့ရှုးနံ့ဆိုတာ ရေမွှေးတစ်မျိုးပါပဲလို့ ပြောများပြောတတ်ရင်ပြန်များပြောမလားမသိ။
နောင်နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြာသောအခါ
ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လေး လှန်အိပ်နေရာမှ အနားရောက်လာတဲ့ သားတော်မောင်ကိုတိုးတိုးလေးခေါ်လိုက်တယ်။
"အ..မေ..လေ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့လို့ အိပ်ရာပေါ်မှာပဲ ကျင်ငယ်စွန့်မိလို့ပါကွယ်"
"ဟာဗျာ...အမေတို့ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိထားပါဆိုတာလည်း မရဘူး။နည်းနည်းလေးတော့ သတိလေးထားဦးမှပေါ့။ ကျွန်တော်တို့လည်း အားတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်တော့ဘူး ဆိုရင်လည်း အိမ်ဖော်ကောင်မလေးကို ခေါ်ပြီး အနားမှာချပေးထားတဲ့ ဆီးအိုးထဲထိ ရောက်အောင်တော့ လုပ်ပေါ့။"
"အေးပါ သားရယ်..နောက်ဆို အမေထိန်းပါ့မယ်။သားကို အလုပ်တွေ ပိုရှုပ်အောင်လုပ်မိတဲ့ အတွက် အမေတောင်းပန်ပါတယ်ကွယ်"
"မိတူးရေ...မိတူး...နင့်အမေကြီးအတွက် ထမီအဟောင်းတစ်ထည် ယူခဲ့စမ်းပါ။ ပြီးရင် တစ်ခါတည်းလဲပေးလိုက်နော်။ ဟုတ်ပြီလား"
အိမ်ဖော်ကောင်မလေးကို အော်ပြောရင်း ထွက်ခွာသွားတဲ့ သားတော်မောင်ရဲ့ ကျောပြင်ကို ငေးကြည့်ရင်း ... ။
ညီလေးရေ...မင်း အိမ်မှာ ဖေဖေနဲ့ ခဏခဏ စကားများကြတယ်ဆို။ ဘာ အဆင်မပြေတာတွေ ရှိနေလို့လဲ။ ဖေဖေက မင်းအပေါ်မှာ နေရာတကာလိုက်ပြီး တားဆီးပိတ်ပင်နေလို့လား။ ဖေဖေက အေးအေးနေတဲ့သူပါ။ ပြီးတော့ ယောကျာ်းလေးတွေ အကြောင်းလည်း သိသလို၊ နားလည်း နားလည်ပေးတတ်ပါတယ်။ ကိုကို့အထင်ပြောရရင်တော့မင်းအရင် တစ်နှစ် ကျောင်းမတက်လိုက်ရပဲ ပုတ်သွားတဲ့ အတွက် ဖေဖေ အရမ်းစိုးရိမ်သွားတယ် ထင်တယ်။ မင်းကိုလည်း အကြီးနှစ်ယောက်လို ဖြစ်စေချင်တဲ့ စိတ်၊တော်စေချင် တတ်စေချင်တဲ့ စိတ်တွေကြောင့် ညီလေး ဘာပဲလုပ်လုပ် အားမရနေတာဖြစ်မှာပါ။ဒီလိုပဲ ညီလေးရ မိဘဆိုတာ သားသမီးတိုင်းကို အမြင့်ဆုံးဆိုတာတွေ ပဲ ဖြစ်စေချင်ကြတာ၊ ပြောရရင် မိဘတိုင်းက သားသမီးတွေနဲ့ ပက်သက်လာရင် အရမ်းလောဘကြီးတာပေါ့ကွာ။ အဲဒါတော့ သူတို့မှာ အပြစ်မရှိဘူးကွ။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ကိုယ်ကိုတိုင်မွေးထုတ်ထားတဲ့ သားသမီး မပြောနဲ့၊ ကိုကိုတောင်မှ မင်းကို အမြင့်ကြီးထိ ဖြစ်စေချင်တာဆိုတော့ ဖေဖေ၊မေမေတို့ မျှော်လင့်တယ်ဆိုတာ သဘာဝ ကျပါတယ်။အဲဒါကိုတော့ညီလေး နားလည်ပေးစေချင်တယ်။ နောက်တစ်ခု ကိုကို တွေးကြည့်ရသလောက် မင်းဖေဖေ့ကို အမြင်မကြည်တာလေးတွေ ရှိမယ်ထင်တယ်။ ဖေဖေကိုယ်တိုင် ပညာမတတ်ခဲ့ပေမဲ့ မင်းကို ပညာတတ်ဖြစ်စေချင်လို့ ပြောဆို၊ဆုံးမနေတယ်ဆိုတာ နားလည်ပေးပါ။သားတစ်ယောက်ကို ဘယ်လို ပြောရမယ် ၊ ဘယ်လိုဆုံးမရမယ်ဆိုတာ ဖေဖေ မသိခဲ့တဲ့အတွက်လည်း မင်းကို ဆုံးမတဲ့ စကားလုံးတွေ မှားချင်မှားနေလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖေဖေ့ရင်ထဲက စေတနာမမှားဘူးဆိုတာ တစ်ချိန်ကျ မင်းနားလည်လာမှာပါ။ နောက်တစ်ခုကအိမ်ထောင်ဦးစီး တစ်ယောက်အနေနဲ့ မိသားစုကို ချမ်းချမ်းသာသာ မထားပေးနိုင်တာ၊စီးပွားမရှာပေးနိုင်တာအတွက်လည်း မင်းဖေဖေ့ကို ပြစ်မှားမယ်ဆို မင်း အများကြီးမှားသွားလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ... ဖေဖေက ကိုကိုတို့ မိသားစုကို ချမ်းသာအောင် စီးပွားမရှာပေးနိုင်ဘူးဆိုတာ ဒါပေမဲ့ ကိုကိုတို့အတွက် အကြင်နာတွေပေးခဲ့တယ်။ ဘယ်တုန်းကများ ကိုကိုတို့ကို ရိုက်ခဲ့ဘူးသလဲ။ ညီလေးတို့ အရွယ်မှာ ဝတ်ချင်၊စားချင်တာ မှန်ပါတယ်။ မိဘဆိုတာတော့ ကိုယ့်သားသမီးကို အကောင်းဆုံးတွေချည်း ဆင်ပေးချင်တဲ့ သူတွေချည်းပါပဲ။ကိုကိုတို့ မိသားစုအတွက် ဖေဖေအလုပ်လုပ်ခဲ့တာတွေ အကြောင်းကိုကိုကို မှတ်မိသလောက်ပြောပြချင်တယ်။ ကိုကိုတို့ ငယ်ငယ်က... ဖက်စပ်တစ်ခုမှာဖေဖေ အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဖက်စပ်တွေ မရှိတော့တဲ့ အချိန်ကျ ဦးလေးတစ်ယောက်ဆီမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့ပြန်တယ်။ အခြားမြို့မှာ သွားအလုပ်လုပ်နေရပေမဲ့ နီးနီးလေးဆိုတော့ တစ်ပတ်တစ်ခါလောက် အိမ်ကို ဖေဖေ ပြန်ပြန်လာတတ်တယ်။ ဖေဖေ ပြန်လာ တိုင်း ကိုကို့တို့အတွက် အင်္ကျီ၊ မုန့်၊ကစားစရာ လေးတွေ ပါပါလာမြဲမို့ဖေဖေ့ကို အသာလေး အလုပ်လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရခဲ့တာလို့ ထင်ခဲ့မိပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ အလုပ်ကြမ်း အလုပ်ကို ( ကျွဲပုခုံး ) ထအောင် လုပ်ခဲ့ရတာလေ။ကိုယ်ကိုကိုယ်တော့ ပင်ပန်းအောင်လုပ်ပြီး မစားမသောက်နဲ့ သားသမီးတွေကိုတော့ လှအောင်ဆင်၊ဝအောင် ကျွေးခဲ့တာပါ။ ဖေဖေ့မှာ ဥာဏစွမ်းအားမရှိခဲ့တဲ့အတွက် ကာယစွမ်းအားသုံးပြီး ရှာဖွေခဲ့ရတယ်။စက်ဘီးတစ်စင်းနောက်မှာ ငပိ၊ငခြောက်၊အဝတ်အစားတွေတင်ပြီး ရွာတွေကို သွားရောင်းခဲ့ရသေးတယ်။ သီးနှံပေါ်ချိန်ကျ ပြန်သွားပြီး ပိုက်ဆံ၊ဂျုံ၊နှမ်းစတာတွေ ကို အဝတ်အထည်တွေ အစား ပြန်ကောက်လာပြီး မြို့ ကျမှပြန်ရောင်းပေါ့။မင်းမွေးလာပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဦးလေးတစ်ယောက် ရဲ့ ကားမှာ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီး လိုက်ခဲ့သေးတယ်။ နောက် သစ်လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့လည်းသစ်လုပ်ငန်းဆိုတာကို လုပ်လိုက်ပြန်ရော။ အလုပ်ဆိုတာလည်း လုပ်တိုင်းတော့ ဘယ်အောင်မြင်နိုင်မလဲကွာ။ ဖေဖေက ရိုးတယ်၊အေးတယ်၊အားနာတတ်တယ်။ဖေဖေနဲ့တူတူလုပ်ခဲ့တဲ့ သူတွေက အခုဆို ချမ်းသာနေကြပြီး ဖေဖေကျ မချမ်းသာဘူးဆိုပြီး မင်းစိတ်ထဲမှာ ဘဝင်မကျမဖြစ်ပါနဲ့ကွာ။ ရိုးသားတဲ့ ဖေဖေ့အတွက် မင်းဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းပါ။ပြီးတော့ ... အလုပ်တစ်ခုကို အရိပ်လေးအောက်မှာ ချွေးမထွက်ရပဲ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ချမ်းသာနေတဲ့ သူတွေရဲ့ သားသမီးတွေထက် ပညာမရှိလို့ ကာယအားကိုးနဲ့အလုပ်မျိုးစုံကို နဖူးက ချွေး၊ ခြေမကျအောင် လုပ်ပြီး ဆင်းရဲရတဲ့ မင်းအဖေရဲ့ သားဖြစ်ရတာ မိဘမေတ္တာကို ပိုခံစားလို့ ကောင်းပါတယ်။ ချမ်းသာတာ မချမ်းသာတာတော့ကံတရားပေါ့။ ဒါကြောင့်...ဖေဖေ၊မေမေ တို့က သူတို့တွေ ပညာမတတ်ခဲ့လို့ ၊အခုလိုပင်ပန်းရလို့၊ ကိုကိုတို့ အားလုံးကို ပညာတတ်ကြီးတွေ ဖြစ်အောင် သင်ပေးခဲ့တာပေါ့။ဖေဖေနဲ့မေမေ တာဝန်ကျေပါတယ်ကွာ။ အခုလောက်ပြောရင် မင်းလည်း နားလည်မယ်လို့ ကိုကို ထင်ပါတယ်။မင်းကို သားလိမ္မာတစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်၊ သားတစ်ယောက် ပီသစေချင်တယ်။
တူမငယ်လေး Dream က တက်ထားပါတယ် ဦးစွမ်းရေ ဆိုတုန်းက ရမလားဆိုပြီး ရှိုင်း
နေသေးတယ်။ ဟင်...မရေးသေးဘူးလားလို့ မျက်ရည်လေး စမ်းတမ်း စမ်းတမ်းနဲ့ပြော
လာတော့ အော်..မဖြစ်သေးပါဘူး ဟဲ့..ဒီတစ်ခါ မရေးသေးရင် နောက်တစ်ခါ ဆို လမ်း
လယ်ခေါင် ခြေဆင်း၊ ခြေးချင်းပွတ်ပြီး ငိုရချည်ရဲ့ဆိုပြီးအပြေးအလွားရေးလိုက်ရတယ်။
အပြေးအလွား ရေးတယ်ဆိုပေမဲ့ ဖြစ်သလို ရေးထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လို
ရေးရမယ်။ ဘာတွေရေးရမယ်ဆိုတာ သူများတွေ ဆီလိုက်ကြည့်ပြီးရေးခဲ့တာပါ။ကြည့်
တုန်းကတော့ အော်..ကိုယ့်အကြောင်းလေးတွေ ရေးပြရမှာပဲ အေးဆေးပါဆိုပြီး ထင်ခဲ့
နဲ့ တစ်ယောက် တက်ကြ ၊သွားကြ၊လာကြနဲ့တစ်ကယ်ကိုပျော်စရာကြီးပါပဲဗျာ။ပြေးတမ်း
လိုက်တမ်း ကစားနေတာပါပဲ။ တူမငယ် Deamရေ...ဦးစွမ်းရေးပြီး သွားပြီဆိုတော့မငိုနဲ့
တော့နော် .. တစ်တစ် .အော် ငိုထားတာ နှပ်တွေကိုထွက်လို့ပါလားကွယ်ရှို့။သုတ်လိုက်
နာမည် - ကိုစွမ်း
ရင်းနှီးသူတွေကတော့ ဒီလိုခေါ်တယ် - စွမ်းကြီး
နေရာ - မိခင်ရင်ခွင်နဲ့ အဝေး
ဖုန်းဆက်ချင်ရင် - ဂဏန်းလေးတွေ နှိပ်လိုက်ပါ
အကြိုက်ဆုံး အရာ - အိမ်ခေါင်မိုးပေါ် ကျလာတဲ့ မိုးစက်လေးတွေ အသံကို နားထောင်ရင်း စောင်ခြုံလေးထဲမှာ ဝတ္တုဖတ်နေရတာ ( ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်နဲ့ )
အကြိုက်ဆုံး စာအုပ် - ဖေမြင့်ရဲ့ "အပြောင်မြောက်ဆုံး ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း"
အရောင်ကတော့ - အပြာနု နဲ့ အေးချမ်းတဲ့ အရောင်နုလေးတွေကို ကြိုက်တယ်
အစားအစာ - လ္ဘက် အရမ်းကြိုက်တယ်။
သီချင်းကျတော့ - တိုက်ဆိုင်တာလေးတွေဆို ပိုခံစားလို့ကောင်းတယ်
ဘဝ စတိုင် အနေနဲ့ - စိတ်ထဲမှာ ရှင်းရှင်းလေး နေရတာမျိုးပါ
ဝါသနာ - ယောင်ခြောက်ဆယ်
အလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင် - မရှိပါ
အချစ်ဆုံးတစ်ယောက် - ရှိပါတယ် ( မေမေ ) :P
အလေးစားဆုံးပုဂ္ဂိုလ် - လေးစားထိုက် သူမှန်သမျှ
အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်း - အနားတွင် မရှိပါ
နားလည်ပေးနိုင်ဆုံးသူ - အများကြီးပါ
အမုန်းဆုံးသူကတော့ - မရှိပါဘူး။
ရင်အခုန်ဆုံးအချိန် - ခွေးလိုက်ဆွဲလို့ လွတ်အောင် ပြေးနေရတဲ့ အချိန်
အကြောက်ဆုံး - အထင်လွဲခံရမှာ
အပျော်ဆုံးအချိန် - ခရီးလမ်းမှာ ဒုက္ခအိုးကြီးလွယ်ထားရတုန်း ကားရပ်သွားချိန်။ :D
အမှတ်တရနေ့ - မန္တလေးတောင်ခြေမှာပေါ့ဗျာ ( ဆိုင်တွေ အများကြီးပဲလို့ ) :P
ဆုတောင်းတာတော့ - ပိုက်ဆံပြတ်နေချိန် အိမ်က ပိုက်ဆံအမြန် ရောက်ပါစေ။
အချစ်ဆိုတာ - ရယူခြင်းမှ မဟုတ်ပဲ မဏိစန္ဒာ ..အာ...ဟာ...... :D
အမုန်းဆိုတာ - မရှိကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခု
အလွမ်းကတော့ - လူတိုင်းမှာ ရှိကြစမြဲပါပဲ
သံယောဇဉ် - ဘိန်းနဲ့တူတယ်. ( စွဲပြီးရင် ဖြတ်ဖို့ မလွယ်လို့ )
ဘဝ ဆိုတာ - ဘကုန်းရေဘ ဝလုံးရေဝ
သူငယ်ချင်း - ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာ မမြင်ချင်ယောင်မဆောင်ပဲ ၊ မိမိရှိရာ ထည့်တိုးဝင်လာတတ်သူ
ချစ်သူဆိုတာ - ပါးစပ်နဲ့ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းဆိုပြရင်တောင် ပြုံးပြုံးလေးနားထောင်တတ်တယ်။
လက်ဆွဲဆောင်ပုဒ် - တော့ မရှိဘူး . ကြိုက်တဲ့ ဆောင်ပုဒ်တွေတော့ ရှိတယ်။
အပြောချင်ဆုံး စကားတစ်ခွန်း - with malice toward none, with charity for all.
ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ - ငပျင်းလို့ ထင်တယ်။ :)
မင်း ပျော်နေတာကို ကြည့်ပြီး
ကျွန်တော်ရေးသားခဲ့သော ကဗျာဆန်ဆန် စာစုလေးများအား ကဗျာ ဟု level တပ်ထား ပါ
သော်လည်း ကဗျာဟု မရည်ရွယ်ပါ။ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုလည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မရေးဖွဲ့
တတ်ပါ။ ထိုကြောင့် ကဗျာlevelရှိ (ကျွန်တော်ရေးသားသော) စာစုလေးများသည်ကျွန်တော်
ရေးတတ်သလို ရေးသားထားခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါသဖြင့် ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ ဂုဏ်နဲ့ မညီညွှတ်ခဲ့ရင်
ဇော်ဂျီယူနီကုတ်သုံး မြန်မာဝီကီပီဒီယာ အကြောင်းကို သြဂုတ်လ ( ၇ ) ရက်နေ့ထုတ် အင်တာနက် ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ကိုစည်သူအောင် နဲ့ အိုင်တီသမား ကိုအိုကီစံ တို့ က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကိုဘလူးဖီးနစ် က ပူးပေါင်းကူညီခဲ့ပါတယ်။
ကိုဘလူးဖီးနစ်ဆီ အလည်သွားတုန်း အင်တာနက်ဂျာနယ်ဆိုတာလေး တွေ့တာနဲ့ မြန်မာ
သားတိုင်း ပါဝင်ကူညီနိုင်အောင်၊ အကိုကြီးဆီက တောင်းပြီး ဖော်ပြပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဟိုး..အနောက်ဆီမှာ မှုန်ပျပျ မြင်နေရတဲ့ ရှင်မတောင်..တောင်၊ အနားယူဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ရွှေအိုရောင် နေမင်းကြီးတို့ရဲ့ အလှ၊ချင်းတွင်းမြစ်ရဲ့တသွင်သွင်စီးဆင်းနေတဲ့
ရေစီးသံနဲ့အတူ အိပ်တန်းပြန် ငှက်လေးတွေရဲ့ အော်သံတွေနဲ့အတူ ညနေခင်းလေးတစ်ခုဟာ အရမ်းလှပနေတယ်။သူ တစ်ယောက်တည်း။ဟုတ်တယ်။သူတစ်ယောက်
တည်းပါပဲ။ ထိုင်ကြည့်နေမိတာ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲ ဆိုတာတောင် သူ့ကိုယ်သူ မသိတော့ဘူး။ ညနေခင်းရဲ့ အလှတွေထဲမှာ သူ့စိတ်တွေ မိန်းမောသွား
လို့လား။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူ့မျက်အိမ်ထဲမှာ မျက်ရည်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီး သူ့မျက်ဝန်းတစ်စုံကလည်း တစ်နေရာတည်းကို စိုက်ကြည့်နေ
တယ်။ သေချာတယ် ။ သူ့ရင်ထဲမှာတော့.............တိတ်ဆိတ်စွာ ဆုတောင်းနေမိတယ် ။ မင်းတို့လေးတွေပြန်လာပါတော့။
နာကျင်မှုဆိုတာ ခဏခဏကြုံတွေ့လာရရင် ထုံသွားပြီး ခံနိုင်ရည် ရှိတတ်တယ်လို့ သူကြားဘူးခဲ့တယ်။ အဲဒီစကားက သူ့အတွက်တော့ ရာနှုန်းပြည့် အမှားကြီးပါပဲ။
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူ့ရင်ခွင်ကနေပြီး သူချစ်တဲ့ သူတို့လေးတွေတစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ထွက်ခွာသွားတိုင်း သူနာကျင်ခဲ့ရတယ်။ အချိန်ကာလတွေ ဘယ်
လိုပဲ ပြောင်းလဲသွား ပြောင်းလဲသွား သူကတော့ သူ့ရင်ခွင်က ထွက်ခွာသွားတဲ့ သူတို့လေးတွေကို သတိရနေ၊တမ်းတနေတုန်းပါ။သူ့ရင်ခွင်က နောက်ဆုံးထွက်ခွာသွားမဲ့
သူက ဘယ်သူဆိုတာလည်း အခုချိန်ထိ သူမသိရိုးအမှန်ပါ။
မင်းတို့လေးတွေ ဘာဖြစ်လို့များ ငါ့ရင်ခွင်ကနေ ထွက်ခွာသွားကြတာလဲကွာ။ မင်းတို့အပေါ်မှာ ငါတာဝန်မကျေခဲ့လို့လား။ ငါ့ရင်ခွင်က မင်းတို့အတွက် နွေးထွေးမှုတွေ
မပေးစွမ်းနိုင်တော့လို့လား။ ဟားးးးးးးးးး လေပူတစ်ချက် မှုတ်ထုတ်ရင်း သူ့စိတ်ကို တစ်ခဏတာ အနားပေးဖို့ လှည့်စားလိုက်တယ်။ ဟော...အခုလည်း တစ်ယောက်၊
သူ့ရင်ခွင်ကနေ ထွက်ခွာဖို့ ပြင်ဆင်နေပြန်ပြီ။ ဒီတစ်ခါမှာလည်း သူ့ ဆန္ဒအတိုင်း မသွားဖို့၊ တားမြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ထွက်ခွာသွားကြတဲ့ သူတွေရဲ့စကားလုံးတွေနဲ့တစ်ထပ်တည်း
ကျတဲ့ စကားတွေ သူထပ်ကြားခဲ့ရပြန်တယ်။ မင်းတို့လေးတွေ ပြောတဲ့ ပညာရေး၊စီးပွားရေး၊ဘဝတိုးတက်ရေး...............စတဲ့ စတဲ့ ( အရေးပေါင်း ) များစွာကို ငါ နား
မလည် ခဲ့ပါဘူး။ ငါ့အတွက်လည်း အဲဒါတွေမလိုအပ်ပါဘူး။ ငါ့အတွက်လိုအပ်တာ၊ အရေးကြီးတာ ငါချစ်တဲ့ မင်းတို့လေးတွေကို အမြဲတမ်း ငါ့ရင်ခွင်မှာ ထွေးပွေ့ထားဖို့
တစ်ခု တည်းရယ်ပါ။ မင်းတို့ ဘဝလေးတွေ အောင်မြင်ဖို့၊ လှပလာဖို့အတွက် ဒီတစ်ခါလည်း ငါ့နှလုံးသားကို လမ်းအဖြစ်ချခင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အဝေးမှာ ရောက်နေတဲ့ မင်းတို့ထဲက တစ်ယောက်ယောက်ကများ ငါ့ကို သတိရနေ၊ လွမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးတွေ ငါပြန်ကြားရတဲ့ အခါများဆို ငါ့ရင်ထဲမှာ ပြော
မပြနိုင်လောက်အောင် ကြည်နူးမိပါတယ်။ မင်းတို့တွေ တနယ်တကြေးမှာ အဆင်ပြေနေတယ်။ အောင်မြင်နေတယ် ဆိုရင်လည်း င့ါရင်ခွင်က ထွက်ခွာသွားတဲ့မင်းတို့
အတွက် ငါကိုယ်တိုင် ဂုဏ်ယူမိခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် ပညာရေးနယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်လို့ နိုင်ငံရပ်ခြားဆိုတဲ့ ငါဘယ်လိုမှ လိုက်မမှီတဲ့ အရပ်ဒေသမှာတောင် ပညာ
တွေ သွားသင်နေရတယ်ကြားပြန်တော့လည်း ငါ မွေးရကျိုးနပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီး ကျေနပ်မိပါတယ်လို့ ဝန်ခံပါရစေ။ တစ်ခါတစ်ခါကျရင်လည်း ကြိုးစားရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့
အချို့အတွက်လည်း ငါ...ပြောမပြတတ်လောက်အောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ မင်းတို့တွေ အောင်မြင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျဆုံးသွားရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ။မင်းတို့အပေါ်မှာ
ထားတဲ့ င့ါရဲ့ မေတ္တာ၊အကြင်နာတွေက ချင်းတွင်းမြစ်ရေရဲ့ စီးဆင်းမှုနဲ့ အတူ ထာဝရ မပြောင်းလဲပါဘူး။
အောင်မြင်တဲ့ သူတွေကို ငါတစ်ခုတော့ မှာပါရစေ။ ဘယ်လို အခြေနေ၊ဘယ်လို အဆင့်အတန်းမှာပဲ ရှိနေ၊ရှိနေပါစေ။ မိမိကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ မြေကြီးကို မမေ့ပါနဲ့။
အပင်မြင့်လေ လေတိုက်ခံရလေဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အမြင့်မှာ နေချင်တယ်၊တည်မြဲနေချင်တယ်ဆိုရင် လေတိုက်တဲ့ ဒဏ်ကိုတော့ ခံနိုင်စွမ်းရှိအောင် ကြိုးစားပါ။
ကြိုးစားရင်း ကျဆုံးနေတဲ့ သူတွေအတွက်လည်း...လဲရင်ပြန်ထပါ။ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ လောက ကြီးကို ပြုံးပြုံးလေးပဲ ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ။ မင်းတို့ကို သူအလဲ
ထိုးတဲ့အခါတိုင်း အတတ်နိုင်ဆုံးအားယူပြီး ပြုံးပြုံးလေးနေလိုက်စမ်းပါ။ မင်းရဲ့ ဇွဲနဲ့ သတ္တိအတွက် နောက်ဆုံး သူ့ ရှုံးနိမ့်သွားပါလိမ့်မယ်။
မင်းတို့တွေ ပင်ပန်းနေတဲ့အခါ၊ အနားယူလိုတဲ့ အခါတိုင်း ငါ့ကိုတော့ သတိရပေးကြပါ။ အချိန်ရတယ်ဆိုရင်လည်း င့ါဆီကို တစ်ခါတစ်ခေါက်လောက် ပြန်လာကြပါဦး။
မင်းတို့အတွက် ငါ့အိမ်တံခါးကို အမြဲဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ အချိန်တွေကြာလာပေမဲ့ ငါ့အိမ်လေးက မင်းတို့ ရှိတုန်းကလိုပဲ ဘာမှပြောင်းလဲမသွားသလိုငါကိုယ်တိုင်လည်း
ရင်ခွင်အောက်က သူတွေကို ပြုစုပေးရင်း ကျန်းကျန်းမာမာရှိနေဆဲပါ။
ကျွန်တော့်မွေးရပ်မြေ ( ရေစကြိုမြို့ ) လေးကို သတိရလို့ ပို့လေးတစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မွေးရပ်မြေနှင့် ဝေးကွာနေသူတိုင်းအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
မြန်မာဟီရိုးဝက်ဆိုက်နှင့်မြန်မာဟီးရိုးဖိုရမ် အတွက် ကြော်ငြာလေးတွေပါ ခင်ဗျာ။ မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ( အဟီး ) ကူးယူဖော်ပြပြီး ကြော်ငြာပေးနိုင်ပါသည်။
ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပုံနှစ်ခုကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားနည်းချက်၊လိုအပ်ချက်များရှိရင်လည်း ပြောဆို ညွှန်ပြပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒီဆိုက်တွေ
မှာ စာမူတွေရေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း မေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဘလော့ဂါ ညီအစ်ကို မောင်နှမများမှလည်း မိမိတို့နဲ့ နီးစပ်ရာ၊ နီးစပ်ရာများကို လက်တို့ပြီး
ဒုတိယပိုင်းဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမည်။ ရင်ခုန်စွာ စောင့်မျှော်နေပါ :D ။
PS- ဘယ်သူရေးဆွဲထားတဲ့ ကာတွန်းလေးတွေမှန်း မသိပါ ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် စက်ထဲမှာတွေ့လို့ကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။သိရှိသူများ ပြောပြသွားပါ
Posted in ကာတွန်း by ကိုစွမ်း